Azonao atao ny mangataka ny fanesorana ny fitaovana rehetra nalain'ny zon'ny mpamorona. Raha mahita fitaovana toy izany ianao na alefa eto na mifandray, afaka mifandray aminay ianao ary mangataka ny fanesorana azy.
Ireto singa manaraka ireto dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny fangatahana fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona:
1. Manome porofo momba ny olona nahazo alalana hihetsika ho an'ny tompon'ny zo tokana izay lazaina fa manitsakitsaka.
2. Manome fampahalalana mifanerasera ampy hahafahanao mifandray aminao. Tsy maintsy mampiditra adiresy mailaka ihany koa ianao.
3. Fanambarana fa ny antoko mitaraina dia manana finoana matanjaka fa ny fampiasana ny fitaovana amin'ny fomba fitarainana dia tsy nahazo alàlana avy amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona, na ny mpampiasa azy, na ny lalàna.
4. Fanambarana fa marina ny fampahalalana ao amin'ny fampandrenesana, ary noho ny fanamelohana, ny fahefana mitaraina dia manome alalana hanao zavatra ho an'ny tompon'ny zo tokana izay lazaina fa manitsakitsaka.
5. Tsy maintsy nosoniavin'ny olona nahazo alalana hiasa ho an'ny tompon'ny zo tokana izay lazaina fa manitsakitsaka izy ireo.
Alefaso any amin'ny mailaka ny fanamarihana fandikana an-tsoratra:
Azafady avela 2 andro hanesorana ny sary momba ny zon'ny mpamorona.